Articles Published in August, 2016 | Sagal Radio Services
Madaxweynaha Soomaaliya oo dhambaal ka helay Ra’iisul Wasaaraha cusub ee Ingiriiska.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta kulan kula qaatay magaalada Muqdisho wasiirka dowladda Ingriiska u qaabilsan Afrika iyo Bariga Dhexe Tobias Ellwood.
Maxkamada ciidamada Uganda oo ku xukuntay xabsi hal sano ah Maj Bob Francis (Sawiro)
Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dalka Uganda ayaa maanta magaalada Muqdisho ka furtay dacwado loo heysto 17 askari oo ka tirsan ciidanka nabad ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM.
Shirka Madasha Wada-tashiga oo maanta laga soo saarayo Jadwalka Doorashada
Shirka Madasha Wada-tashiga Qaran oo shalay ka furmay magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu wadaa in la soo gaba gabeeyo, iyadoo go’aan laga gaari doono xilliga ay dhaceyso doorashada.
Isbaheysiga Xisbiyada Siyaasadda oo ku baaqay in la dhiso Xukuumad xilka sii heysa
Guddoomiyihii hore Gobolka Banaadir Muungaab oo loo magacaabay Wasiiru dowlaha Caddaalada
Guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Xasan Maxamed Xuseen Muungaab ayaa goor dhow loo magacaabay Wasiiru Dowlaha Caddaalada.